Amakati kaNoti yiwebhusayithi ebikukwazisa kusukela ngo-2012 ngakho konke odinga ukukwazi ukunakekela ikati lakho: izifo, izinto elizidingayo, ukuthi ungakukhetha kanjani ukudla kwalo, yiziphi izifo elingaba nazo, nokunye okuningi, ukuze ungajabulela inkampani yakho iminyaka eminingi. Lapho okuhlangana kakhulu.
Ithimba lokuhlela lamaNoti Gatos lakhiwa ngabahleli abalandelayo. Uma unentshisekelo yokusebenza nathi, kufanele nje gcwalisa ifomu elilandelayo futhi sizoxhumana nawe.
1.1 UMonica sanchez
1.2 UMaria Jose Roldan
2 Abahleli bangaphambilini
2.1 UViviana Saldarriaga Quintero
2.2 URosa Sanchez
Ngibheka amakati izilwane ezinhle kakhulu lapho singafunda khona okuningi kuzo, futhi nakithi. Kuthiwa lezi fining ezincane zizimele kakhulu, kepha iqiniso ukuthi bangabangane abakhulu nabangane.
Njengoba ngikhumbula ngingazibheka njengomthandi wekati. Ngibazi kahle ngoba selokhu ngaba mncane kakhulu ngibe namakati ekhaya futhi ngiye ngasiza amakati abenezinkinga ... angikwazi ukukhulelwa impilo ngaphandle kothando lwabo nothando olungenamibandela! Bengihlale ngikuqeqesho oluqhubekayo ukuze ngikwazi ukufunda okwengeziwe ngazo nokuthi amakati angiphethe, ahlala njalo enokunakekelwa okuhle nothando lwami oluqotho ngabo. Ngakho-ke, ngiyethemba ukuthi ngingaludlulisa lonke ulwazi lwami ngamazwi nokuthi alusizo kuwe.
UViviana Saldarriaga Quintero
NgingowaseColombia othanda amakati, engifisa ukuwazi kakhulu ngokuziphatha kwabo nobudlelwano abanabo nabantu. Bayizilwane ezihlakaniphe kakhulu, futhi ababi nesizungu njengoba bengathanda sikholwe.
Ngingasho ukuthi ikati lingaba umngane omkhulu womuntu. Zihlala zizungezwe yibo, ziyangihlaba umxhwele futhi ziyangimangaza ngomthamo wazo omkhulu wokuzivumelanisa nezimo futhi, ngaphezu kwakho konke, uthando olungenamibandela ezikubonisa zona. Yize uhlukaniswe kakhulu futhi unedumela lokuzimela, ungahlala ufunda okuningi kubo, uma unesineke sokukufunda.
Ngizizwa nginelukuluku lokufuna ukwazi ngomhlaba wamakati oholela ekutheni ngiphenye futhi ngifune ukwabelana ngolwazi lwami. Ukwazi isimilo sabo, ulimi lomzimba wabo, nendlela yabo yokuphila kubalulekile ukuze kube nokuhlalisana okuhle.